Ciidanka Kenya oo Dhalinyaro Soomaali ah ku dilay Garissa | Keydmedia
25 September 2020 Nin Hoobiye ka tuuri rabay degmada Dayniile oo la qabtay
25 September 2020 Howlgal miino baaris ah oo laga sameeyey J/hoose
25 September 2020 Goorma ayaa heshiiska doorashada la horgeynayaa BFS?
25 September 2020 Banaanbax looga soo horjeedo ciidamada Kenya oo ka dhacay Gedo
25 September 2020 Farmaajo oo khudbad ka jeediyay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay
25 September 2020 DF oo ku guuleysatay dib-u-eegista koowaad ee Barnaamijka ECF
Ciidanka Kenya oo Dhalinyaro Soomaali ah ku dilay Garissa
Warbaahinta Kenya ayaa soo warinaysa in saraakiishan loo qabtay 14 maalmood oo dheeraad ah si baaritaan loogu sameeyo.
GARISSA - Mas’uuliyiinta amniga Kenya ayaa xiray laba sarkaal oo boolis ah oo la sheegay inay dad rayid ah ku dileen magaalada Gaarisa dabayaaqadii isbuucii hore.
Laba sarkaal oo ka tirsan Agaasinka Baarista Dambiyada Kenya (DCI) ayaa lagu eedeeyay inay dileen wiilal degganaa Garissa, oo lagu kala magacaabi jiray Muhiyadin Adow Shibin oo 49 jir ah iyo Aadan Cabdi Madoobe oo 50 jir ah.
Toddobaadkii hore, iyagoo ugaarsanaya tuhmanayaal argagixiso xaafad u dhow suuqa xoolaha Magaalada, ayay askartu rasaas ku fureen dhibbanayaasha kahor inta ayan ka bixin meesha. Sida ay sheegeen dadka goobjooga ahaa, askartu waa la qabtay, waxaana la horgeynayaa maxkamad kadib markii ehelka dhibanayaashu ay aqoonsadeen.
Isagoo sii deynaya tuhmanayaashan maalintii isniinta, ayuu garsooraha maxkamada sare ee magaciisa la yiraahdo Timothy ole Tanju ayaa sheegay in booliisku ay u adeegsan doonaan labada todobaad in ay baaraan arinta.
"Dhacdadu waxay ka dhacday Soko ya Ng'ombe. Markii dambe, dadka deegaanku waxay ku guuleysteen inay magacabaan saraakiishii ku lugta lahayd, ka dibna la qabtay, ”ayuu yiri Wakiilka Gobolka Waqooyi-bari Nick Ndalana.
Toogashadan waxaa cambaareeyay gudoomiyaha Gobolka Gaarisa, Cali Korane iyo Xildhibaanka Magaalada Gaarisa Aadan Ducaale. Hay'ada Madaxa Bannaan ee Ilaalinta Bilayska (Ipoa) iyo Agaasinka Baarista Dambiyada ayaa baaraya xukunka dilka.
“Baaritaannada, oo ay la socdaan soo jeedinta Ipoa iyo xafiiska Agaasimaha Xeer-ilaaliyaha Guud (DPP), ayaa lagu ogaan doonaa in saraakiishu xaq u leeyihiin inay adeegsadaan hubkooda,” ayay DCI ku soo qortay boggeeda Twitter-ka.
0 Comments Topics: al shabaab garissa kenya
Weerar ka dhacay Saldhig military oo ku yaall duleedka Kismaayo
Warar 29 August 2020 14:02
Dadka degaanka ayaa sheegaya inay maqlayeen rasaas iyo qaraxyo xili uu socday dagaal toos ah oo labada dhianc u dhaxeeya, kaasoo geystay khasaarooyin isagu jira dhimasho iyo dhaawac.
Fahfaahin: Qarax khasaaro sababay oo ka dhacay Beled-Xaawo
Warar 17 August 2020 15:13
Canshuur lagu kordhiyay Qaadkii la keeni jiray Soomaaliya
Warar 13 August 2020 17:33
Dowlad aan Bakaaro ka talin sidee doorasho qof iyo cod ku qabanaysaa?
Warar 11 August 2020 10:59
Warar 25 September 2020 4:10
Bajaajlayaasha waxaa la dilaa iyaga oo bixinaya canshuurtii dowladda, waana cadaalad daridda ka jirta Muqdisho sida uu Farmaajo xilka ula wareegay oo ku kalliftay dhalinyarro badan in ay gabi ahaamba dalka isaga tagaan.
Goorma ayaa heshiiska doorashada la horgeynayaa BFS?